Kachasị mma nke kacha mma RA Copper Foil Manufacturer and Factory | Civen
Ihe mkpuchi ọla kọpa akpọre akpọre akpọrọ bụ ihe dị mma nke CIVEN METAL mepụtara. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ngwaahịa foil ọla kọpa, ọ nwere ịdị ọcha dị elu, imecha elu ka mma, ịdị larịị ka mma, nnagide karịa na njikwa nhazi zuru oke. Nnukwu foil ọla kọpa abụrụla degrease na mgbochi oxidized, nke na-enye ohere ka foil nwee ogologo ndụ nchekwa ma dị mfe iji ihe ndị ọzọ kpuchie ya. Ebe a na-arụpụta ihe ma na-akwakọba ya n'ime ụlọ na-enweghị uzuzu, ịdị ọcha nke ngwaahịa a dị oke elu ma na-emezu ihe achọrọ na mpaghara nrụpụta elektrọnik dị elu. A na -achịkwa ma na -enyocha ngwaahịa anyị niile nkenke agbakwunyere na foil ọla kọpa, yana ebumnuche nke enweghị ntụpọ ọ bụla. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị dochie otu ngwaahịa ọkwa sitere na Japan na mba ọdịda anyanwụ, kamakwa ọ ga -ebelata oge nrụpụta maka ndị ahịa anyị.
Ọkpụkpọ ọla kọpa bụ akụrụngwa dị mkpa maka imepụta bọọdụ sekit e biri ebi (PCB), mkpuchi mkpuchi mkpuchi ọla kọpa (CCL) na batrị lithium-ion. Enwere ike kewaa foil ọla kọpa n'ime foil ọla kọpa na foil ọla kọpa dị ka usoro nrụpụta ya si dị. A na -eme foil ọla kọpa electrolytic site na ọla kọpa electrolysis dabere na ụkpụrụ electrochemical. Ọdịdị dị n'ime nke foil na -acha akwụkwọ ndụ bụ usoro kristal kwụ ọtọ, ọnụ ahịa mmepụta ya dịkwa obere. A na -akpụpụta foil ọla kọpa nke agbakwunyere site na usoro mgbapụta ugboro ugboro nke ntinye ọla kọpa dabere n'ụkpụrụ nhazi plastik. Ọdịdị ya dị n'ime bụ flake crystalline structure, na ductility nke ngwaahịa foil ọla kọpa dị mma. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị foil ọla kọpa electrolytic na-arụpụta bọọdụ sekit siri ike, ebe a na-ejikarị foil ọla kọpa eme ihe na bọọdụ sekit na-agbanwe agbanwe na nke dị elu.
● C11000 Ọla kọpa, Cu> 99.99%
● Oke ọkpụrụkpụ: T 0.009 ~ 0.1 mm (0.0003 ~ 0.004 inch)
● Ogologo obosara: W 150 ~ 650.0 mm (5.9 inch ~ 25.6 inch)
Ngwongwo dị elu na -agbanwe agbanwe, edo edo na akwa dị larịị nke foil ọla kọpa, mgbatị dị elu, nguzogide ike ọgwụgwụ, nguzogide ọxịdashọn siri ike na akụrụngwa dị mma.
Kwesịrị ekwesị maka ngwa elektrọnọnụ dị elu, bọọdụ sekit, batrị, ihe mkpuchi, ihe mgbasa ọkụ na ihe na-eduzi.
Nke gara aga: Ọla kọpa Nickel Foil
Osote: RA Ọla kọpa Foils maka FPC